Shina CMH mitombo hazavana 150W Manufacturing and Factory | RIKO
Mitombo ny fikolokoloana maivana
Fitaovana elektrika sy jiro
CMH mitombo jiro 150W
Ny zavamaniry ao anaty anatiny dia mitombo ny jiro fanilo avy amin'ny anatiny dia natao hamokatra hazavana ambony indrindra amin'ny jiro. Ny rafitra sy ny balastika, raha manome modely maivana manokana ho an'ny fampiharana manokana.
Ny zavamaniry ao anaty anatiny dia mitombo ny jiro fanilo avy amin'ny anatiny dia natao hamokatra hazavana ambony indrindra amin'ny jiro. Ny rafitra sy ny balastika, raha manome modely maivana manokana ho an'ny fampiharana manokana. Ireo rafitra azo itokisana ireo dia manampy amin'ny fambolena ny fitomboana sy ny angovo fitahirizana angovo, raha manatsara ny vokatra sy ny fahombiazana, hametraka ny zavamaniry ao anaty hazavana tsara indrindra.
Ity rafitra jiro miroborobo tanteraka ity dia miaraka amin'ny jiro Ceramika Metal Halide (CMH) 150W, ballast elektronika matetika tsy mihena, jiro herinaratra misy plug sy mpanantona ratchet azo zahana. Famolavolana fanamainam-batana maivana izay miasa toy ny jiro ambony ao amin'ny efitrano fitomboana anatiny ary mitombo ny tranolay. Ny haavon'ny fametrahana tena tsara dia manodidina ny 3ft (90cm) eo ambonin'ireo zavamaniry ho tsara kokoa ary na dia ny fizarana maivana aza. Raha te hampitombo ny fitomboan'ny hazavana ianao dia safidy tsara indrindra.
Key Features & tombony
Rate Ny taratry ny refy avo be noho ny teknolojia coating anatiny dia mampitombo ny fahazavana mahomby amin'ny voly.
Design Ny famolavolana optika tokana mifototra amin'ny taratra fitaratra, na dia ny fizarana jiro aza.
Ÿ Freaky ny ballast digital ballast, fahombiazana bebe kokoa ary kalitao maharitra.
Lamp Fahazavana PAR famoahana padamika vita amin'ny halide metaly, dia manome ny marindrano indrindra amin'ny UV ka hatramin'ny IR.
Angle Sudam-bary 33 ° 45 ° dia azo alaina amin'ny fampiharana mitombo samihafa.
Ÿ Tsy misy olan'ny oksidena raha oharina amin'ny tariby aluminium.
Famaritana & Parameteran'ny teknika
VRange oltage 165-265VAC
IPower matotra <175W
Output Frequency 100Hz
Hatronic ny fisarahana <10%
Current Ratio Crest <1,7
Bsy Angle 33 ° 44 °
Li Source G12 Ceramic Metal Halide (CMH) 150W
Color Suhu 3000K, 4000K
Material Fitaratra Borosilicate, Aluminum, PCB
Ptariby an-trosa 6ft (1.8m) miaraka amin'ny plug AC
Dimension 190 * 190 * 75mm / 1.0kgs
Fonosana 24 x 24 x 23CM / 1pcs isaky ny baoritra / 1.5kgs
Efitra fitomboana anatiny, zavamaniry anatiny mamboly trano maitso, mitombo trano, hortikultura ary jiro fambolena.
Previous: Ny varotra mafana dia mitarika ny jiro marika Led - Light-End End High High PAR CMH 630W Grow Lamp - RIKO
Manaraka: Fiovana fanamorana hazavana CMH / LEC 315W 500W
Cmh mitombo ny fikolokoloana maivana
Fiovana fanamorana hazavana CMH / LEC 315W 500W
GrowBetter Double Ended CMH 630W Jiro Greenhouse
Fiovana jiro mitombo avo roa heny HPS 400W / ...
Ireo fomba fiasa lehibe amin'ny fampiasana tariby Tecnofil dia omena eto ambany
Fangatahana ao an-trano
Voninkazo sy voankazo
Jiro mitombo, Arotsaha fanaovan-jiro ho an'ny zavamaniry anatiny, Tariby hitondrana, Uv Lamp For Plants, Jiro fitomboan'ny fambolena, Jiro anatiny,